UltimateFaves, birao Android amin'ny carousel 3D | Androidsis
Androany aho dia mitondra anao fangatahana antsoina Ultimatefaves izay ahafahantsika manana hitsin-dalana kely eo amin'ny birao amin'ny endrika 3D carousel. Azontsika atao ny mametraka ny rindranasa, ny fifandraisana amin'ny telefaona, ny tsoratadidy amin'ny Internet na ny fifandraisana amin'ny hafatra. Ny zavatra voalohany nolazaiko fa nihaona taminy aho misaotra olona iray izay arahiko amin'ny twitter ny anarany @dadotres
Afaka mamorona carousel betsaka araka izay tadiavintsika isika ary mamorona hitsin-dàlana amin'ireto amin'ny birao ahafahantsika miditra amin'izy ireo amin'ny tsindry tokana.
Izy io dia manana safidy marobe momba ny haben'ny sary masina, loko any ambadika, mangarahara mitovy, hafainganana amin'ny carousel, orientation ny écran, mihozongozona rehefa mihodina, sns….
Fampiharana iray ahafahantsika manana dingana vitsivitsy amin'ny rindranasa rehetra, ny fifandraisana, ny be mpampiasa indrindra ary amin'ny fomba vaovao. Maimaimpoana ny fampiharana ary azonao atao ny misintona azy avy Android Market amin'ny alàlan'ity manaraka ity Kaody QR. Avelako koa ianao horonan-tsary iray ahafahanay mahita ny fampiharana Ultimatefaves miasa.
Tranonkala ofisialin'ny fampiharana.
Ampahatsiahiviko anao fa afaka manaraka anay ianao Twitter tamin'ny alàlan'ny @androidsis
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » ULTIMATEFAVES, DESROOTRA ANDROID ATY 3D CAROUSEL
Tsy hitako fa tena azo ampiharina ...
FAMERENANA MORESTONE MOTOROLA AMIN'NY halaliny